August 5, 2018 site na rịọ 2 Comments
June 16, 2018 site na rịọ 6 Comments
Version 0.9.9.0 – Ndị ọrụ nke ụwa – dịrị n'otu!
Ike 1, 2016 site na rịọ 8 Comments
Na nke mbụ nke May, mba ndị ọrụ ụbọchị anyị mesịrị tọhapụ ndị dị nnọọ ogologo igabiga na-atụ anya version nke 0.9.9.0.
Gịnị bụ ihe a version mma maka?
Akpa – nkwado maka Baidu, na Chinese search ibu nke nwekwara a translation engine, na nkwado maka Cantonese nke bụ utu pụrụ iche n'ihi na nke a engine. Ọzọ ihe ọma bụ na a engine, weebụsaịtị ahụ na-kwadoro na China nwere ike ịnweta a na-arụ ọrụ translation engine.
Nke abụọ – anyị ofu nke ugbu a isi erughị kwado ma Google na Yandex, otú n'ezie, ha ga na-arụ ọrụ ọzọ now. Ya mere, ọ bụrụ na peeji ole na ole na gị na saịtị na-adịghị sụgharịa, ọhụrụ version ọkọdọ gị kpuchie. A ole na ole na-asụ asụsụ e kwukwara na usoro.
Nke atọ – nza nke mgbanwe, mgbakwunye na ahụhụ fixes gburugburu. Na na na, anyị mkpa ndozi na akwụkwọ na FAQ maka ụfọdụ.
Gịnị mere i ji ka na-agụ nke a? Dị nnọọ kwalite taa, na ọrụ echi!